COVID-19 – စာမကျြနှာ9– Healthy Life Journal
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူတွေရဲ့သွေး (သွေးရည်ကြည် Plasma) ကို လိုအပ်တဲ့လူနာတွေထံ သွင်းပေးတဲ့ ကုသနည်းကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူရဲ့သွေးထဲမှာ အင်တီဘော်ဒီခေါ် ခုခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဓာတ်ပါရှိတာကြောင့် ကယ်လ်လီဖိုးနီးယားမှာ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေမှာ စတင်သွင်းပေးနေတယ်လို့...
COVID-19 လူနာများအတွက် ဆေးရုံအဖြစ် ပြင်ဆင်နေသည့် ဖောင်ကြီးဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တွင် မကြာမီ ကုသမှုပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဖောင်ကြီးဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ကို COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာများထားရှိရန် ကုတင် ၂၀ဝ မှ ၂၀ဝ၀ ဆံ့ ဆေးရုံအထိ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများကို Training ပေးခြင်း၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းနှင့် အခြားလိုအပ်သော...
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၃ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမလား၊ ၆ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမှာလား . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် အပြင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်နှပေအကွာအဝေးမှာ နေရမလဲ ဆရာ။ ၃ပေလား၊ ၆ပေလား။ A. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၃ ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ USကတော့...
COVID-19ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နိုင်သလဲ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က- – လေထဲမှာဆိုရင် အပူချိန် ၅၀-၅၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ၄ နာရီကြာ၊ ၇၇...
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား ဆရာ။ A. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က အရွယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်က125 nanometer ပဲရှိပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်တဲ့ အမှုန်အမွှား (droplet)...
ဆေးခန်းပြတဲ့အခါ ကိုယ့်ရောဂါရာဇ၀င်အကြောင်းပြောရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရှိသလဲ . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ဆေးခန်းပြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ရောဂါရာဇ၀င်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက်အတွင်း နိုင်ငံခြားသွားထားဖူးသလား စတာတွေကို အမှန်အတိုင်းပြောရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆရာဝန်ကို ကိုယ့် History ပြောခြင်းအားဖြင့်...